तिथि मेरो पत्रु » पहिलो छाप – प्रयोगकर्ता नाम
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Mar. 26 2020 |2मिनेट पढ्न
JDate मा, म nyfunnyguy32 म कुनै स्पष्ट कारण लागि mysterE32 गर्न सरेका सम्म थियो. मेरो चुनिएको monikers के तपाईं हुनेछ भन्न, तर तिनीहरूले अरू सबैलाई जस्तै आवाज छैन. MysterE प्रयोग शब्दहरू मा एक प्ले छ, स्पष्ट, शब्द “रहस्य” र मेरो पहिलो प्रारम्भिक. म वास्तवमा समय समयमा यसमा compliments प्राप्त. Nyfunnyguy राम्रो नाम हुनेछ म न्यूयोर्क बस्ने थिए भने, तर, लस एन्जलसका एक महिला गर्न, कमेडी लेख्छन् जो पूर्वी तट मान्छे कुराकानी सुरु गर्न राम्रो आधार हो. म एक पल्ट एक स्यान्टामोनिका पट्टी मा मेरो प्रयोगकर्ता नाम द्वारा पहिचान गरिएको थियो हुँदा पनि, “अरे, Nyfunnyguy!”, यो एक महत्वपूर्ण reaffirmed, लाजमर्दो कुरा भने ñ मेरो विज्ञापन प्रभावकारी भएको थियो. म त्यो भने थियो शङ्का “अरे, Mike1234” यदि मेरो नाम थिए.
प्रयोगकर्ता नाम र शीर्षकहरू जस्तै कुराहरू अनलाइन daters धेरै छेउमा एउटा कांडा छन्. म अर्थ, कुनै एक साँच्चै यो सामान ख्याल गर्नुहुन्छ, के तिनिहरु? सबैभन्दा भाग लागि, जवाफ कुनै छ. जबसम्म यो egregiously खराब वा ñ थप शायद असाध्यै राम्रो N. राम्रो प्रयोगकर्ता नाम वास्तवमा कुराकानी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ – म धेरै कारण लागि BePatientImBlond संग कुरा गर्न. म अन्य ग्राहकहरु सहायता गर्नुभएको (जो प्रयोगकर्ता-Nameless रहनेछ), र मात्र तिनीहरूको प्रोफाइल मा ठूलो प्रतिक्रिया मिल्यो छैन, तर साथै आफ्नो प्रयोगकर्ता नाम मा kudos.
केही दर्जन सदस्य मार्फत ब्राउज गर्नुहोस् र बाहिर खडा कति प्रयोगकर्ता नाम गणना. धेरै छैन, म तपाईंलाई आश्वस्त. किनभने सबै त्यहाँ कुनै विचार वा रचनात्मकता एक छान्ने कार्यरत. तर किन अतिरिक्त माइल जान? तपाईं प्रिय भन्ने विषय छनौट. यो तिम्रो बारेमा सबै कुरा भन्न छैन, वा तपाईंलाई बारेमा केही. बस केहि मजा. आफ्नो टाउको मा वरिपरि विचार स्पिन, विभिन्न कोण बाट ज्योति यसलाई पकड. ढिलो होस् वा चाँडो, केही पप रहेको छ. भन्ने कुरा आफ्नो प्रयोगकर्ता नाम हुन जाँदै छ. सबै भन्दा राम्रो व्यक्तिहरूलाई सामान्यतया शब्दहरू डबल entenders वा नाटकहरू छन्; परिचित लिएर र यो फरक बनाउने. mysterE जस्तै, उदाहरणका लागि. तपाईंले जे सुझाव, त्यहाँ एक punny छ, यदि हास्यास्पद छैन, जवाफ.
सिटी योजना? UrbanMiff.
ओह, मा आउन! पक्कै तपाईं UrbanMiff लेख्न जाँदै हुनुहुन्छ! नरक, म म नाम भनेर gonna प्रयोग छु लाग्छ.
प्रयोगकर्ता नाम आश्चर्यजनक महत्त्वपूर्ण छन्, किनभने तिनीहरूले dealbreakers हुनुहुन्छ, तर तिनीहरूले वेबसाइटमा आफ्नो चिनारीलाई शाब्दिक हुनुहुन्छ किनभने. र किन कसैले उहाँले JayhawksRock हुन सक्छ जब TopekaTim हुन चाहनुहुन्छ?
जब तपाईं किराना चेकआउट लाइन मा खडा हुनुहुन्छ धेरै boldface तपाईं एक ट्याबलोइड टिप्न बनाउँछ कि प्रकार जस्तै, प्रयोगकर्ता नाम भित्र हेर्न आफ्नो निर्णय मा एक प्रभाव हुन सक्छ. सबै कुरा बराबर बाँकी, फोटो औसत छ भने, के तपाईं तपाईं हाँस्न बनाउनुभएको कसैले एउटा लाइन प्रयोग गरेर हेर्न जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई बताउन छन्? तपाईं जाने पूल को खोक्रो अन्त गर्न! हामीलाई बाँकी gonna brainstorm यहाँ केही प्रयोगकर्ता नाम हो.